BBC Maxay tahay sababta boqoradda Ingiriiska loo geeynayo meel ammaan ah | Biyoguurenews.com
Home Wararka BBC Maxay tahay sababta boqoradda Ingiriiska loo geeynayo meel ammaan ah
BBC Maxay tahay sababta boqoradda Ingiriiska loo geeynayo meel ammaan ah
Laba wargeys oo ka mid ah kuwa ugu caansan dalka Britain ayaa maanta oo Axad ah qoray iney dowladda Britain ay dib u soo cusbooneysiineyso qorshihii degdegga ee dagaalkii qaboobaa iyada oo laga cabsi qabo iney bisha soo socta rabshado la xidhiidha heshiis la’aanta ka bixitaanka Britain ee Yurub ay dalkaasi ka dhacaan.
“Qorshaha badbaadada degdegga ah oo xilligi dagaalki qaboobaa dalka Britain ka hirgeli jiray ayaa loo baahday in dib loo soo celiyo maadaamaa heshiis la’aanta ka bixitaanka midowga Yurub ee Britain ay dalkaasi ka dhalatay”.
Wargeyska Sunday Times oo soo xigatay wasiir xukumadda May ka tirsan oo magaciisa la qariyey ayaa sheegtay in dowladda looga baahan yahay xaaladaha amni darro ee iman kara tallaabbooyin ay kaga sii hortageyso iney qaaddo.
Wargeyska The Mail on Sunday ayaa wuxuu sida oo kale qoray in loo baahan yahay in la meel mariyo qorshe boqoradda iyo qoyska Boqortooyadaba lagu geeynayo meel ammaan ah oo ka baxsan Magaalada London.
Xukumadda Britain ayaa dadaal ugu jirta sidii ay tageera ku saabsan ka bixitaanka Midowga Yurub ay uga heli lahayd Baarlamaanka dalkaasi ka hor inta aan la gaarin muddada loo qabtay ee March 29, iyada oo dowladduna ay iisu diyaarineyso meelmarinta heshiis ku meel gaar ah oo looga tala galay ‘isafgarasha la’aanta’ Midowga Yurub.
Shirkadaha ganacsiga ayaa ka digay saameynta ballaadhan ee ka dhalan karto alaabada Britain Yurub ka soo galo oo uu hakad galo ay dhici kartana cunna iyo dawa yari dalka soo foodsaarto.
Khudbad ay boqoradda 92 jirka ee Ingiriiska ay u jeedisay ururrada haweenka dalkaasi waxay ugu baaqday iney kaalintooda ka qaataan sidii ay siyaasiyiinta isafgarasho uga gaari lahaayeen heshiiska ka bixitaanka Midowga Yurub.
Jacob Rees-Mogg, oo ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn u taageersan ka bixitaanka Midowga Yurub ayaa wargeyska Daily Mail u sheegay inuu aaminsan yahay qorshaha dowladda inuu yahay mid aan loo baahneyn si kasta oo ka bixitaanka midowga Yurub heshiis looga gaarinna waa iney boqoradda iyo boqortooyadaba ay ka bixin London maadaamaa xilligii duqeymaha dagaalka Labaad ee adduunkaba socotay ay meel uga bixin London.
Balse wargeyska Sunday Times ayaa qoray inuu sargaal hore oo ka tirsanaa Booliska uu u xil saaran yahay badbaadinta boqortooyada oo la yirahdo Dai Davies, inuu u sheegay in boqoradda meel ka baxsan London la geeynayo haddii ay degganaasha la’aan dalka ka dhacdo.
Wuxuuna intaa ku daray “haddii ay magaalada London xasilooni darro ka dhacdo, iney qasab tahay in gooba ammaan ah la geeynayo”.
Previous articleGudoomiye Axmed Shide Oo Gaadhay Magalada Jigjiga Iyo Ujeedada Safarkiisu La Xidhiidho
Next articleMaraykanka: Arday u xidhan inay iska diwaangeliyeen jaamacad aan jirin